आरएमडीसी लघुवित्तको ३ लाख ९४ हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामिमा, भाउ कति ? - Arthasansar
आरएमडीसी लघुवित्तको ३ लाख ९४ हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामिमा, भाउ कति ?
विहीबार, २७ जेठ २०७८, १५ : ४३ मा प्रकाशित
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आरएमडीसी लघुवित्तको संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । फरवार्डले असार ३ गतेबाट आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आरएमडीसीको ३ लाख ९४ हजार ६३४.४६ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री खुला गर्न लागेको हो ।
यसमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता ८५० रुपैयाँ तोकिएको छ । सोही मूल्यलाई आधार मानेर बोलकबोल गर्नुपर्नेछ । लगानीकर्ताले यसलाई न्यूनतम मूल्य आधार मानेर सो वा सोभन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन् ।
न्यूनतम १००० कित्ता र १० ले भाग जाने गरी अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताका लागि पनि आवेदन दिन सकिनेछ । असार १७ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्न सकिनेछ । यसमा सनराइज क्यापिटल कमलपोखरी, काठमाडौं पुग्ने गरी आवेदन दिनुपर्नेछ ।